Wepamusoro gumi Mabhuku Ekufamba eVadikani Vanofarira | Kufamba Nhau
Wepamusoro gumi emabhuku ekufamba evadikani vanofarira
Lola curiel | | General, Kufarira, famba
Kufamba ndeimwe yeanonakidza uye anovandudza zviitiko pasi rose. Nekudaro, dzimwe nguva, isu tinomanikidzwa kubvisa chishuwo chedu chekutsvaga nekuda kwekuda kwekugara munzvimbo yakatarwa kana nekuda kwekushayikwa kwezororo. Verenga nezvenzvimbo dziri kure papasi uye dzidza nezve ruzivo rwevamwe vafambi, inzira yakanaka yekuuraya bhagi uye kutanga kuronga nzira dzako dzinotevera. Ini ndinokusiya mune ino positi rondedzero yeavo ari kwandiri iwo gumi akanakisa emabhuku ekufamba evadikani vekunakidzwa Usapotse!
1 Nzira ipfupi
3 Italian Suite: Rwendo kuenda kuVenice, Trieste neSicily
4 Kubuda kwezuva muSoutheast Asia
5 Zviroto zvaJupita
6 Nhungamiro yevafambi vasina mhaka
7 Mumvuri weSirik Road
8 Nzendo Shanu kuGehena: Adventures neni uye Izvo Zvimwe
9 Kunzira dzesango
10 Tsamba nhatu kubva kuLos Andes
Makore gumi nemaviri gare gare, mutori wenhau Manuel Leguineche anorondedzera mukati "Nzira ipfupi" mavambo ake akararama sechikamu che Trans World Rekodhi Kubuda, rwendo rwakatangira kubva peninsula uye rwakatora varwi varo kufamba kupfuura makiromita makumi matatu nemazana matatu ne35000 x 4. Zvakare inyaya yemukomana uyo ane chishuwo kupfuura ruzivo, akazvinyudza kuti azadzise hope: "Enda uchitenderera pasirese".
Rwendo, rwakatora anopfuura makore maviri, rwakapfuura Africa, Asia, Australia neAmerica, panguva iyo makumi maviri nemapfumbamwe penyika dzaive mumugwagwa dzaive muhondo. Pasina kupokana, nyaya inonakidza uye inofanirwa-kuverengerwa kune vadikani vezvakataurwa zvakanaka.
Wona izvozvi paAmazon
A classic yekufambisa mabhuku, nyaya yega yega inotangira kubva paudiki hwemunyori wayo, Bruce Chatwin.
Kana iwe uri kutsvaga kuomarara, iyi inogona kunge isiri bhuku rauri kutsvaga, nekuti dzimwe nguva chokwadi chinosanganiswa nendangariro nenyaya kunyepedzera. Asi kana iwe ukaedza, iwe unonakidzwa nerwendo rwaChatwin uye iwe uchaona kukosha kwePatagonia, imwe yenzvimbo dzemashiripiti uye dzakakosha pasi rino.
Italian Suite: Rwendo kuenda kuVenice, Trieste neSicily
Kugadzirwa kwekunyora kwaJavier Reverte, kwakanangana nekufamba, ndiko yakakurudzirwa kwazvo kurota yenzvimbo dzakanakisa pasina kusiya imba.
Italian Suite: Rwendo rwekuVenice, Trieste neSicily ingangoita chinyorwa chinyorwa mune iyo Reverte inotitorera kunzvimbo dzakanakisa uye dzinoyevedza dzeItari. Uye zvakare, nhoroondo yekufamba yakasanganiswa nenyaya uye nhoroondo yezvakaitika zvinobatsira kuti unzwisise nzvimbo iyi.
Kubuda kwezuva muSoutheast Asia
Ndiani asina kumbofunga nezvekutyora monotony? Munyori weDawn muSoutheast Asia, Carmen Grau, akafunga kutora nhanho kumberi uye nekusiya basa rake kuti ararame chiitiko chaaigara achirota nezvacho. Akasiya hupenyu hwake muBarcelona uye akashongedzerwa nebhegi, akatanga rwendo rurefu.
Kwemwedzi minomwe akatenderera Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia, Burma, Hong Kong, Malaysia, Sumatra, uye Singapore. Mubhuku rake, anogovera zvese zvechiitiko chake, nzendo mumabhoti, mabhazi, zvitima uye husiku muhostel.
Mukurota kwaJupiter mutori wenhau Ted Simon anorondedzera mavambo ake achifamba nyika muchikepe cheTriumph. Simon akatanga rwendo rwake muna 1974, achibva kuUnited Kingdom, uye mukati memakore mana akafamba nyika dzinosvika makumi mana neshanu. Iri bhuku inyaya yenzira yake kuburikidza nemakondinendi mashanu. Kana iwe uri mumwe wevaya vanoda asphalt, haugone kuipotsa!
Nhungamiro yevafambi vasina mhaka
Usatarisira zvakajairika gwara rekufamba kana iwe ukaverenga bhuku iri. Mark Twain, uyo anganzwika akajairika kwauri semusiki waTom Sayer, akashanda muna 1867 kupepanhau reAlta California. Gore rimwe chetero, akabva kuNew York rwendo rwekutanga rwevashanyi munhoroondo yazvino uye Twain akauya kuzonyora akateedzana ezvinyorwa pakukumbira kwepepanhau.
Mugwara revafambi vasina mhaka vanounganidza rwendo rukuru irworwo rwaizomutora kubva kuUnited States kuenda kuNyika Tsvene uye, nerondedzero yake, anorondedzera kuyambuka kwake mumahombekombe eMediterranean nekunyika dzakaita seEjipitori, Girisi kana Crimea. Imwe poindi yakanaka yebhuku iri Twain maitiro ake, ine hunhu hwakanyanya izvo zvinoita kuti kuverenga kunakidze uye kunakidze kwazvo.
Mumvuri weSirik Road
Colin Thubron munyori akakosha wemabhuku ekufambisa, mumwe wevaya vasina kuneta vafambi vakafamba inopfuura hafu yepasi uye vanoziva kuzviudza kwazvo. Mabasa ake akapihwa zvakawandisa uye akashandurirwa mumitauro inodarika makumi maviri. Iwo ekutanga mabhuku eiyo genre yaakaburitsa akatarisana nedunhu reMiddle East uye, gare gare, nzendo dzake dzakatamira kune yaimbova USSR. A) Hongu, bhaibheri rake rese rekufamba anofamba pakati peAsia neEurasia uye gadzira chaiyo X-ray yenharaunda yakafara yepasi uko kunetsana, shanduko yezvematongerwo enyika uye nhoroondo zvinosanganiswa netsika nemagariro.
Muna 2006, Thubron anoburitsa Iyo Shadow yeMugwagwa weSilika, bhuku raanogovana rwendo rwake runoshamisa munzira huru yepasi rese. Yakabva kuChina ndokufamba nemuAsia mizhinji kusvika kumakomo eCentral Asia, anopfuura makiromita zviuru gumi nerimwe mukati menguva yemwedzi misere. Chinhu chakanakisa nezvebhuku rino kukosha kwazvinopihwa neruzivo rwemunyori waro. Akange ambofamba chikamu chikuru chenyika idzodzo uye, achidzoka makore akati gare gare, kwete chete kunotora nhoroondo yemugwagwa waive wakakosha zvakanyanya mukusimudzira kwekutengeserana kwekuMadokero, anopa fananidzo uye chiono chekuti shanduko uye mhirizhonga zvachinja sei nzvimbo.
Nzendo Shanu kuGehena: Adventures neni uye Izvo Zvimwe
Martha Gellhorn aive piyona wemunyori wehondo, mutori wenhau wekuAmerica akafukidza makakatanwa muzana ramakore rechiXNUMX Europe, akafukidza Hondo Yenyika II, aive mumwe wevokutanga kumhan'ara pamusasa wevasungwa weDachau (Munich) uye akatomboona kumhara kweNormandy.
Gellhorn akapfuura nemumamiriro ezvinhu ane njodzi zvakanyanya panyika uye njodzi yaive nguva dzose muma adventures ake, mu Nzendo Shanu kuGehena: Adventures neni uye Izvo Zvimwe, inotaura nezve izvo zvakaoma, iri a kuunganidzwa kwedzakanakisa nzendo dzake dzakaipisisa maanotaura matarisiro aakaita kutya pamwe nematambudziko asina kurasikirwa netariro. Iri bhuku rinosanganisira kufamba kwake achipfuura neChina naErnest Hemingway panguva yechipiri Hondo yeSino neJapan, kufamba kwake kuburikidza neCaribbean kunotsvaga maGerman submarines, nzira yake kuburikidza neAfrica uye nzira yake kuburikidza neRussia yeUSSR.
En Kunzira dzesango Munyori weAmerica Jon Krakauer anotaura nyaya ya Christopher Johnson McCandless, murume wechidiki anobva kuVirginia uyo muna 1992, mushure mekupedza kudzidza muHistory uye Anthropology kubva kuEmory University (Atlanta), afunga kupa mari yake yese oenda parwendo munzvimbo dzakadzika dzeAlaska. Akaenda asina kuonekana uye asina kana chishandiso. Mwedzi mina gare gare, vavhimi vakawana mutumbi wake. Iri bhuku haringorondedzere rwendo rwaMcCandless, delves muhupenyu hwake uye zvikonzero izvo zvakatungamira murume wechidiki kubva kumhuri yakapfuma kuti ape shanduko yakadaro yehupenyu.
Tsamba nhatu kubva kuLos Andes
Iyo nzvimbo ine makomo yePeruvia Andes ndiyo imwe yenzvimbo dzinodikanwa kune vanoda zvisikwa uye kushanya kwekushanya. Mutsamba nhatu kubva kuAndes, mufambi Patrick Leigh Fermor anogovera nzira yake kuburikidza nenharaunda ino. Akatanga rwendo rwake muguta reCuzco, muna 1971, uye kubva ipapo kuenda kuUrubamba. Shamwari shanu dzakamuperekedza, uye pamwe Hunhu hweboka ndechimwe chezvinhu zvinokwezva kwazvo munyaya iyi. Kufamba kwacho kwaive kwakasiyana kwazvo, kwaive nemudetembi achiperekedzwa nemukadzi wake, nyanzvi yekuSwitzerland skier uye jeweler, anthropologist wezvemagariro, Nottinghamshire aristocrat, muchinda naFermor. Mubhuku, anorondedzera zvese zvakaitika kuboka, kuti vanowirirana sei kunyangwe ivo vakasiyana kwazvo uye maonero avo epasi uye kuravira kwavo kwekufamba kunovasanganisa.
Asi pamusoro penyaya, pasina mubvunzo inokwezva, Tsamba nhatu kubva kuAndes Gut rwendo runonakidza runobva kuguta, kubva kuCuzco, kuenda kunzvimbo dziri kure kwazvo munyika. Vafambi vashanu vakaenda kubva kuPuno kuenda kuJuni, padyo neLake Titicaca, uye kubva kuArequipa vakaenda kuLima. Iwo mapeji ebhuku rino anokuendesa kune yega yeayo nzvimbo Iko hakuna iri nani nyaya yekuvhara iyi runyorwa rwegumi akanakisa ekufambisa mabhuku evanofarira adventure!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Kufarira » Wepamusoro gumi emabhuku ekufamba evadikani vanofarira
Covid bvunzo dzinodiwa nenyika
Iyo yakajairika koshitomu yeVeracruz